देश विदेशमा आज थुप्रै सकारात्मक तथा नकारात्मक घटना परिघटनाहरु भए । ति घटनाक्रमहरुलाई हामीले केन्द्रबिन्दु डटकम र केन्द्रबिन्दुको युट्युब च्यानल मार्फत निरन्तर पलपलमा अपडेट गर्यौ ।
यसरी अपडेट भएका अनेकौ समाचारहरु मध्ये प्रमुख समाचारहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। हाइलाइट गरिएको शिर्षकहरुमा क्लिक गरेर बिस्तृत समाचार पढ्न सक्नु हुन्छ ।
प्रहरी प्रवक्ता भन्छन्, ‘विदेशीले नदेखुन भनेर निर्मलाको पोस्टर हटाईएको हो’
काठमाडौं । निर्मला पन्तको न्यायका लागि टाँसिएका पोस्टर हटाईएको बारे प्रहरीले प्रष्टिकरण दिएको छ । शुक्रबार प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानमा टाँसिएका पोस्टरहरु हटाएको थियो । त्यस्तै शनिवार पोखरामा पनि प्रहरीले नै पोस्टर च्यातेको थियो । उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले प्रष्टिकरण दिएको हो ।
प्रचण्डलाई के भयो ? गए मेडिसिटी अस्पताल !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चेकअपको लागि अस्पताल पुगेका छन् । केही दिन अघि सम्पूर्ण शरीरको चेकजाँच गराएका अध्यक्ष प्रचण्डले आईतबार दिउँसो पुनः ललितपुर भैसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराएका हुन्।
‘ए’ डिभिजन लिगः फ्रेन्डसको पहिलो जीत
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा फ्रेन्ड्स क्लबले मछिन्द्र क्लबलाई पराजित गर्दै पहिलो जीत हात पारेको छ । सात दोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको पहिलो खेलमा फ्रेन्डस्ले मछिन्द्रलाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिगमा पहिलो जीत हात पारेको हो । यसअघि फ्रेन्ड्सले चार खेलमा तीन हार र एक बराबरी खेलेको थियो ।
श्रृंखलाको बाल्यावस्थाबारे उनकीआमाले गरिन्, यस्तो खुलासा (भिडियो अन्तर्वार्ता)
मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा यतिबेला चिनमा छिन् । उनी मिस वल्र्डको टप २० मा प्रवेश गरिसकेकी छिन् । हिजो भएको मिस वल्र्ड अन्तर्गत हेड टु हेड च्यालेञ्जमा उनी मिस सिंगापुरसँग पराजित भइन् । त्यसको लागि उनले भावुक हुँदै नेपालसँग माफि पनि मागिन् । उनको मिस वल्र्डको यात्रा भने अझै टुगिंएको छैन्
अब श्रम स्वीकृति लिन अनलाइनबाटै टोकन
अब श्रम स्वीकृति लिन अनलाइनबाटै टोकन प्राप्त हुन थालेको छ । श्रम स्वीकृति लिनको लागि घण्टौं सम्म लाईन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै अनलाईनबाटै टोकन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन वैदेशिक रोजगारको कार्यालय ताहाचलले आइतबारबाट यो प्रणाली सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका भाषण समेटिएको पुस्तक ‘माइ भिजन’ प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भाषण संग्रह गरिएको पुस्तक प्रकाशित भएको छ । भाषण संग्रह ‘माइ भिजन’ को दोस्रो संस्करण प्रकाशित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए ।
भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने विशेष समारोहको प्रमुख अतिथि दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बन्ने भएका छन् । आउँदो जनवरी २६ तारिखका दिन हुने ७०औं गणतन्त्र दिवस समारोहका प्रमुख अतिथि रामाफोसा हुने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीटर मार्फत् जानकारी दिए ।
धादिङमा बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, राजमार्ग अवरुद्ध
बसको ठक्करबाट धादिङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । धादिङबाट काठमाडौं जाँदैं गरेको बा ३ ख ८३९५ नम्बरको बसको ठक्करबाट बा ३६ प ८३५७ मोटरसाइकलमा सवार गजुरी गाउँपालिका–५ का नारायणकाजी भण्डारीको मृत्यु भएको हो ।
राजधानीमा निर्मलाको पोस्टर च्यात्दा राज्यलाई पर्‍यो महंगो
एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको लागि भन्दै शुक्रबार राजधानीमा निर्मला पन्तका पोस्टरहरु च्यातिए । ति पोस्टरहरु च्यात्ने अरु कोही नभएर कानूनको रक्षक प्रहरी नै थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बेईज्जत हुने भन्दै प्रहरीले नै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि लगाईएका पोस्टरहरु च्यातेका थिए । त्यतिमात्र कहाँ हो र प्रहरीले पोस्टर टास्ने १२ जनालाई पक्राउ पनि गरेको थियो ।
१६ मंसिर २०७५, आईतवार १७:३७
headline, mukhy samachar, news, samachar, दिनभरका समाचार
Prevपार्टी कार्यालय घेरेपछि के भने गगनले ? (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्रीमाथि कांग्रेसको अर्को प्रहार, ‘चौतारीमा राजा भेटिए’Next